Ukubuyela kwikhabhinethi enebhafu eshushu yabucala kunye nesidlo sakusasa 1
Ifama sinombuki zindwendwe onguKaylee
Hlala kwenye yeekhabhathi zethu ezintathu zabucala, nganye ixhotyiswe eyakhe ibhafu eshushu yabantu aba-2 kumgangatho ongasemva ukuze wonwabe phantsi kweenkwenkwezi. Uya kufumana isidlo sakusasa esiziswe kwikhabhinethi yakho ngexesha olikhethayo kusasa(ii). Ikhabhathi nganye ibonelela ngomqamelo-top Queen bed, mini-fridge, microwave, coffee maker, thermostat-controlled gas fireplace, A/C unit, shower, cable TV, and a DVD player. Yonke le nto imi kwi-24+ yeehektare ezintle ezigcweleyo kunye nedama kunye neendlela zokuhamba emahlathini!
Uya kuba nekhabhathi yakho yabucala, iveranda yangaphambili, indawo engasemva, kunye nebhabhu eshushu konke kuwe. Kuya kufuneka uzive ukhululekile ukuba ujonge ipropathi! Uya kufumana ichibi elithandekayo, elinoxolo elinedesika kunye necawa entle endala kunye neendlela zokuhamba emahlathini.
Siyayithanda apha phandle! Intle kwaye inoxolo kwaye andiqinisekanga ukuba uya kuze ubone ukutshona kwelanga okuphefumla ngakumbi. Simi kwilizwe elingaphandle kwedolophu encinci yaseMulvane, KS kodwa sikumgama nje omfutshane ukusuka kuyo yonke into onokuyifuna okanye oyidingayo eWichita kunye neKansas Star Casino! IMulvane ikwanezinto ezintle zokutyela kunye nezolonwabo.
Siyiyekela kuwe le nto! Sinobuhlobo kwaye singathanda ukuhlala kwaye sincokole nawe malunga nomgodi womlilo we-gazebo okanye kwiveranda engaphambili yesakhiwo esikhulu! Oko kuthethiweyo, siyazi ukuba abantu abaninzi baphuma apha bezokushiya abanye okanye bafumane uxolo kunye nokuzola ngoko ke siyavuya kukushiya wedwa. Sifumaneka ngefowuni kakhulu ngamaxesha onke ngayo nantoni na oyifunayo!
Siyiyekela kuwe le nto! Sinobuhlobo kwaye singathanda ukuhlala kwaye sincokole nawe malunga nomgodi womlilo we-gazebo okanye kwiveranda engaphambili yesakhiwo esikhulu! Oko kutheth…